Hel XAFIIS WIC AMA FARIIN #
Waxaa jira xafiisyo 200 WIC oo ku baahsan Gobolka Washington. Si aad u hesho xafiiska WIC ee kuu dhow:
Isticmaal "Soo hel xafiiska WIC"Badhanka barnaamijka WICShopper
Wac Khadka Caafimaadka Qoyska 1-800-322-2588
Qoraalka "WIC" ilaa 96859
SIDEE LAGA HELI KARAA WIC
Isticmaal "Dukaamada WIC"Badhanka barnaamijka WICShopper
Ka raadso "WIC Accepted Here".
Fadlan ogow: Haddii aad jeclaan lahayd inaad soo gudbiso su'aal ku saabsan barnaamijka WICShopper fadlan email WICShopper@jpma.com
Kaararka WIC iyo Gargaarka
Q: Maxay tahay sababta aanan ugu arki karin faa iidooyinkayga cuntada ee WIC ee barnaamijka?
A: Tani waxay ku dhici kartaa dhowr arrimood:
Hubso in kaarkaaga WIC ee hadda lagu diiwaangeliyay barnaamijka
Faa'iidooyinku waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan bixiyaha EBT ka hor intaadan ku arkin barnaamijka. U oggolow app dhowr daqiiqo ka badan. Kadib taabo Rbadhanka efresh in Faa'iidooyinkeyga si aad u cusboonaysiiso qaddarkaaga faa'idada cusub ee barnaamijka.
Si aad u aragto dheefaha hadda:
Taabo Baantii qaboojiyaha gudahood Faa'iidooyinkeyga si aad u cusbooneysiiso macluumaadkaaga
Haddii aadan arkin wax cunno ah oo liis gareysan, oo aad ogtahay inaad leedahay waxtarka, waxay macnaheedu noqon kartaa in gargaarku bilaabmayo maalmo gudahood. Xaaladdan oo kale macaashkaagu wuxuu ku soo muuqan doonaa “Faa'idooyinka Mustaqbalka”.
Taabo on Eeg Faa'iidooyinka Mustaqbalka gudaha shaashadda dheefahayga.
Marka dheefaha hadda jira ay muujiyaan isu-dheellitir eber, waxay ka dhigan tahay in horay loo isticmaali jiray.
Q: Qoysaska korinta ah ma ku diiwaangelin karaan wax kabadan hal kaarka WIC ee barnaamijka?
A: Haa, qoysaska koriya waxay isku qori karaan wax kabadan hal WIC Card isla isla barnaamijka.
Si aad u aragto cunug kasta gargaarada WIC
Tijaabinta Barcode ama Key Key Geli UPC:
Q: Waxaan tarjumay cuntooyinka qaarkood ama furaha galiyay lambarka UPC iyo arag fariimo kala duwan. Maxay ka dhigan yihiin?
Oggol - WIC waxay oggol tahay shaygan. Ilaa intaad ka diiwaangeliso kaarkaaga WIC barnaamijka dhexdiisa, farriintan "oggol" ayaa laga yaabaa inaysan khusaynin gargaarada qoyskaaga. Tusaale ahaan, cunug hal sano jir ah wuxuu helaa caano dhan WIC. Haddii aadan qoyskaaga ku lahayn hal sano jir cunugga, caanaha oo dhan qayb kama noqon doonaan faa'iidooyinkaaga cuntada ee WIC, mana awoodi doontid inaad iibsatid caano dhan meesha jeegga.
Ma aha wax WIC ah - Shaygaani kuma jiro liiska cuntooyinka WIC oggolaaday ama shaykan cuntada lama oggola. Waxay kaloo macnaheedu noqon kartaa inay tahay shey cusub oo aynaan hore u arag.
Fiiro Gaar ah: Fariintani ma khusayso wax soo saarka cusub. Hoos ka fiiri su'aalaha miraha iyo khudradda cusub.
Ma Jiro Faa'iidooyin U-qalma - Shaygan waxaa loo oggolaaday WIC, laakiin adiga ama adiga laguma magacaabin shaygan ama ma lihid faa'iidooyin kugu filan oo aad kaga iibsato alaabta.
Lama ogaan karo - Tani macnaheedu waa appku ma akhrin karo barcode-ka. Halkii aad iskaan ka fiirin lahayd, waxaad isticmaali kartaa badhanka "Key Enter UPC" badhanka si aad u gashid lambarka 12-ka lambar ee UPC ee ku yaal barcode cuntada.
Q: Maxay u yihiin qaar ka mid ah miraha cagaaran iyo khudaarta miyir-garaaca inay yihiin "Ma aha shey WIC ah"?
A: WIC waxay oggolaataa inta badan miraha iyo khudradda cusub. Midho kasta oo khudradda iyo khudradda ah waxay leeyihiin koodh u gaar ah oo maxalli ah. Shuruucdani isku mid maaha dukaamada oo dhan. Sababtaas awgeed, appku ma aqoonsana dhammaan miraha iyo khudradda. Waqti kasta oo app-ka uusan aqoonsan shay, wuxuu iskaan doonaa sida “Ma aha shey WIC ah ”. Isticmaal Cunnooyinka WIC ee loo ogolaan karo batoonka app-ka ee ku saabsan su'aalaha ku saabsan alaabada soosaarka la oggol yahay
Q: Muxuu Kaadhkeyga WIC u bixin waayey miraha cagaaran ee cagaaran ama miraha iyo khudradda kale ee cusub?
A: WIC waxay oggolaataa inta badan miraha iyo khudradda cusub. Fiiri tilmaamaha wax iibsiga ee WIC ama batoonka cuntooyinka WIC ee la ogolaan karo ee ku jira app-ka wixii faahfaahin dheeraad ah. Haddii dheefaha WIC aysan bixinaynin wax soo saarka cusub, nala soo socodsii. Waxaan u baahan doonaa inaan kaa helno macluumaadka soo socda:
Soosaar Shayga: Faahfaahinta badan, way fiicantahay. Tusaale ahaan, intii aan nidhaahnaa tufaaxyo ama miro buluug ah, waxaan u baahan nahay inaan ogaano Gala tufaaxyo Gala 'or blueberries Driscoll blueberries.
Taariikhda: Taariikhda aad wax iibsaneysay.
Magaca dukaanka iyo goobta.
Dukaan kasta waa inuu hubiyaa in waxyaabaha soosaarka cusub ay kuxiran koodhka WIC. Hadday dukaamadu ka maqnaadaan isku xirka shay, shaygu ma iskaan iskaan karo sidii cunno WIC oo taagan goobta baarista. Nala soo socodsii adoo adeegsanaya badhanka "maan iibsan karin" badhankan. Sidoo kale waad noogu soo diri kartaa emaylka at wawicfoods@doh.wa.gov.
Tani ma iibsan karto!
Q: Goorma ayaan isticmaali doonaa, "Anigu ma iibsan karo arrintan"? Maxay tahay?
A: Isticmaal badhankan markii aad u malaynayso in cuntada WIC loo oggol yahay, laakiin markii aad tagtid goob-joojiyaha, waa la diidayaa. Badhankan ayaa farriin noo soo diraya, si aan u aragno sababta ay sidan u dhacday.
Waa tan waxa aan qabanno:
Waxaan dib u fiirineynaa dhamaan agabyadii naloo soo diray.
Haddii alaabada la oggolaado, waxaan ugu darnaa liistada la ansixiyay ee WIC.
Xaaladaha qaarkood, alaabta WIC ee la oggol yahay ayaa loo diidayaa bakhaarka waxaanan u shaqaynaa sidii aan u ogaan lahayn sababta.
Sidaad u caawin karto:
Dib-u-eegistayada, waxaan u baahan nahay faahfaahinta ugu badan ee aad bixin karto. Tan waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Kaydinta magaca iyo goobta
Faahfaahinta sheyga - tusaale ahaan, Darigold lactose caano la'aan ah 1%
Cabbirka xirmada cuntada - Tirada wiqiyadood ama haddii ay ku jirto rubuc, galoon, iwm.
12 lambar "UPC code" oo ku yaal barcode-ka
Hadday suurtagal tahay, sawirrada emaylka ah ee rasiidhada alaabadaas loo diiday wawicfoods@doh.wa.gov
Q: Xagee ayaan ka weydiin karaa su'aalaha cuntada WIC?
A: Waad waydiin kartaa rugtaada WIC ama waad u diri kartaa su'aalaha kooxda cuntada ee WIC ee gobolka wawicfoods@doh.wa.gov.
Ku fiiri Ingiriis